Bulshada Gobalka Sool Oo Ka Qaylisay Lacag Suuqyada Ganacsiga Khalkhalgalisay - Wargane News
Home Somali News Bulshada Gobalka Sool Oo Ka Qaylisay Lacag Suuqyada Ganacsiga Khalkhalgalisay
Muumulka iyo ganacsatada gobalka Sool ayaa ka arinsaday sidii meesha looga saari lahaa lacag cusub oo gobalka Sool ka soo gashay dhanka dalka Somaliya, isla markaasna dhaqaale burbur ku keentay gobalka Sool.
Badhasaabka gobalka Sool Cabdi Khayre Dirir ayaa go’aamo adag ka soo saaray xakamaynta lacagtaas, isaga oo faray ciidamada, ganacsatada iyo gaadiidka magaalada keena in sharciga la horgeeyo. waxaana go’aamada badhasaabka oo afar qodob ahaa isaga oo ka hadlaaya uu yidhi, “1-In gacan lagu dhigo cid kasta oo keenta lacagtaas faalsada ah haday tahay shaqsiyaad iyo haday tahay gaadiid lana mariyo sharciga.
2-in si toos ah loo qaato lacagtii inoo shaqayn jirtay ee dadku ogalaayeen ee ay umaddu kalsoonida buuxda ku qabtay kana socon jirtay gobalka iyo magaalada Laasacaanood.
3-In la qabto waxii ah lacagta la diidan yahay meel kasta ha ka timaado, taas oo keentay burburka dhaqaale iyo khalkhalka nabadgalyo.
4-In cid kasta oo diida lacagtii hore inoogu shaqayn jirtay kuna darta lacagta khalkhalka meeshay joogto lagu qabto lana mariyo sharciga oo umada laga qabto.”
Wasiiiru dawlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo shirkaas ka hadlay soo xidhitaankiisii waxa uu isaguna dhalkaas ka yidhi, “Dhibaatada lacagtaas ina soo gashay ee aafada ahayd ee fidnada inagu keentay ay inoo gaysatay waynu garanaynaa, dhibaato khalkhal amni iyo mid ganacsi iyo mid dhinac walba ah ha ahaatee waatii mar amnigu faraha ka bixi gaadhay, laakiin waxa alle mahadii ah maanta inaynu u joogno oo aynu isla garanay inaynu lacagtaas iska qabano oo aynu iska celino.”
Shacbiga gobalka Sool ayaa ka qayliyay dhaqaale burbur kaga yimi lacagtaa faalsada ah oo gobalkaas ka soo gashay dhanka Somaliya, kaas oo keenay ugu danbayntii in dadka deegaanku uu wada dareemo dhibaatada lacagtaasi ay suuqyada ku soo kordhisay
Somaliland: Hay’adda Socdaalka Sweden oo Baadhista Magan-galyooyinka u isticmaalaysa Baraha Bulshadda